Warshadda Farshaxanka Fanka | Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Shisheeye ee Farshaxanka Shiinaha
Shumac udiyaar leh liin macaan oo shaambad leh
Magaca: Liin dhandhax leh / shamaca miisanka leh oo la wadaago Cabbirka: 7 * 6cm Baakadaha: 100pcs / kartoon, Nalalka / shaambada liiniga ah ee loo yaqaan 'paraffin wax tayo sare leh', shumacyadu waa kuwa gacanta lagu sameeyo. Saliidaha lama huraanka ah badiyaa waa saliidaha udgoon ee loo soo qaato. Shumacyo miro aad u qurux badan oo jilicsan oo jilicsan ayaa lagu meeleeyn karaa qolka jiifka iyo qolka jiifka. Xaqiiqdii waxaa loo jeclaan doonaa hadiyad ahaan saaxiibbada, hooyada, saaxiibka gabadha iyo walaasha.
Ubixi shumaca qaabka ilmaha loogu talagalay qurxinta keega dhalashada
Magaca: Bixiya nambarka qaabka shumaca loogu talagalay qurxinta keegga dhalashada Cabbirka: 9 * 6 * 6CM Miisaanka: 65g Baakadaha: 100pcs / kartoon, Ilmaha hurdada u qaabeeya shumaca dhalashada ayaa ah mid aad u qurux badan oo lagu qurxiyo keegga dhalashada. Shumacyadu waxay leeyihiin wiil iyo gabar, Haddii ilmahaagu u dabaaldego dhalasho, waxaad u isticmaali kartaa inaad ku qurxiso.
shumaca beeswax, shumac shukulaato, Shumacyada codka codka beeswax, shumaca beeswax, shumaca codka, shumaca tiirka beeswax,